Ny zotra Cistercian | Vaovao momba ny dia
Misy làlana sy làlana, làlana izay mitondra antsika mamakivaky sary mahafinaritra sy ny hafa izay mandentika antsika amin'ny tantaran'ny maritrano sy ny fivavahana. Io fitambarana farany io dia ilay antsoina hoe tolotra Làlan'ny Cistercian, fitsidihana ny sasany amin'ireo be indrindra monasitera tsara tarehy any Espana.
Tsy dia lavitra loatra ary mahazatra ny mifidy ny hanao izany ny bisikileta fa mazava ho azy fa afaka manao izany amin'ny fiara na mandeha an-tongotra ianao. Na inona na inona fitaovanao fitaterana, eto ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hahafantarana azy.
1 Ny baiko cistercian
2 Làlan'ny Cistercian
Ny baiko cistercian
Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe Filaharana Cistercian ary efa antitra tsara izy io enyny fototra niorenanao hatramin'ny 1098. Ho an'io taona io, tokony ho Dijon, France, tao amin'ilay tanàna romana taloha CisterciumRobert de Molesmes dia nanangana abbey, farany niavian'ny baiko.
Izy io dia baiko manan-danja tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary nanana farafaharatsiny hatramin'ny fotoanan'ny Tolom-piavotana frantsay. Saingy ny mpanorina azy, Molesmes, dia te hiverina amin'ny fiainana tsotra monasitera, miaraka amin'ny fifadian-kanina sy ny fahantrana ary koa amin'ny asa fiarahamonina marobe, noho izany dia nahazo toerana mitokana izy ary niaraka tamina moanina marobe nahita trano fonenana vaovao. Tsy mora ny andro voalohany fa niaraka tamin'ny fanampian'ny tompon'andraikitra teo an-toerana nahomby izy ireo.
Ny moanina Cistercian tamin'izany fotoana izany dia nitazona volon'ondry manta tsotra, ka nanomboka nantsoina izy ireo "Moanina fotsy". Manomboka amin'ny 1112, hisy dingana vaovao hanombohana ny fototry ny sampana sy ny fitomboan'ny fiarahamonina. Ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX dia ny vanim-potoanan'ny androny.
Tany France izany rehetra izany no nitranga fa any Espana dia misy fiangonana roa an'ny Orinasa Cistercian, ny Kongregasionan'i Aragon ary ny fiangonan'i San Bernardo de Castilla. Ity fiangonana faharoa ity dia nanana vanim-potoana volamena nandritra ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary nanana abbey 45, raha ny an'i Aragon kosa dia monasiteran'ny vavy sy telo lahy monastera mandraka androany.
Mampifandray abbey Cistercian telo ity lalana ity: ny Monasiteran'ny Sante Creus, ny Santa Maria de Poblet ary ny Vallbona de les Monges, any amin'ny faritanin'i Lleida sy Tarragona. Ny filaharana dia niitatra nandritra ny taonjato faha-XNUMX ary tonga tany Espana niaraka tamin'ny fandresen'ny satroboninahitr'i Aragon ny tany antsoina hoe Catalunya nueva, mandra-pahatongan'izany teo am-pelatanan'ny silamo. Ireo mpanjaka aragoney dia nanome baiko ireo moanina cistercian mba hanomezana toerana indray ny tany amin'ny alàlan'ny monasitera mpanorina.
Ny monasitera voalohany amin'ity zotra maro loko ity dia ny Monasiteran'ny Santes Creus. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary Any amin'ny tanànan'i Aiguamurcia no misy azy, ao amin'ny faritanin'i Tarragona. Izy io dia mametraka ny pantheon an'ny mpanjaka ka rehefa mandeha ny fotoana dia nahazo fanomezana be dia be izay nanatsara azy.
Monasitera io tsy misy fiainana monastic mandraka androany. Nilaozan'ny Order izany tamin'ny 1835 ary nambara tamin'ny 1921 Tsangambaton'ny firenena. Ity monastic complex ity dia manana firafitra misy ampahany telo lehibe: ny fiangonana, ny mpanefy azy ary ny trano toko. Satria ny zanabolana dia ny efitrano fandraisam-bahiny, ny refectory, ny efitrano fandraisam-bahiny mahazatra ary ny efitran'ireo moanina. Eo koa ny fasana, infirmary, efitrano ipetrahan'ny moanina misotro ronono, ary Royal Palace.
Vita tamin'ny 1225 ny fiangonana ary toy ny trano mimanda. Izy io dia manana haavony 71 metatra ny halavany 22 metatra ny sakany ary rindrina efa ho telo metatra ny hateviny. Ny endriny dia miendrika hazo fijaliana latina misy tendrony telo ary manana trano fiangonana hafa. Araka ny efa nolazainay etsy ambony, ny fiangonana dia mitazona fasan'ny mpanjaka, ny an'ny mpanjaka Pedro III ao Aragon sy ny amiraly mahatoky ary ny Mpanjaka Jaime II any Aragon miaraka amin'ny vadiny faharoa. Zavakanto kanto roa.
Ny fiangonana faharoa amin'ny zotra Cistercian dia an'ny Santa Maria de Poblet, any Vimbodí. Tsy mihoatra ny 30 kilometatra miala ny voalohany izy io ary eo am-pototry ny ala Poblet sy ny tendrombohitra Prades. Io no lehibe indrindra amin'ireo monasitera telo amin'ny lalana ary Pantheon an'ny satroboninahitr'i Aragon ihany koa io.
Izy io koa dia nanana fotoana be voninahitra, fanitarana ary fitomboana ary koa fnilaozana izany tamin'ny 1835 vokatry ny fanagadrana an'i Mendizabal, dingana iray izay misy ny fivarotana ny fananan'ireo baiko ara-pivavahana voangon'ny volon-tsitrapo sy ny fanomezana ary koa ny tanànan'ny tanàna. Fanokanana fananam-panjakana izay nanana tanjona hahazoana vola ho an'ny kitapom-bolam-panjakana, na tamin'ny fivarotana mivantana na tamin'ny famerenana ny famarotana ny tany taty aoriana tamin'ny mpiasa na burgesisie izay hampandoavina hetra vaovao.
Soa ihany ity monasitera ity dia afaka mamadika ny tantara. Nanomboka tamin'ny 1930 ny fanarenana azy ary dimy taona taty aoriana niverina ireo moanina. Androany dia misokatra amin'ny ampahany amin'ny besinimaro izy io ary a Lova eran-tany nambaran'ny UNESCO. Ny fiangonany, ny jirofoany, ny trano fiangonana ao Sant Jordi sy i Santa Caterina, ny fasan'ny mpanjaka ary ny lapan'ny Mpanjaka Martín el Humano no toerana tena mahaliana hitsidika azy.
Ity farany dia raisina ho firavaka amin'ny maritrano Catalan Gothic ary ankehitriny dia tranombakoky ny monasitera ihany koa. Amin'ny faritra an'ity monasitera ity dia afaka mitsidika ny Tranombakok'i divay any Vimbodí koa isika. Avy eo, rehefa avy nandeha tsy lavitra ny 25 kilometatra izahay dia tonga tany Monasiteran'ny Vallbona de les Monges. Izany dia monasiteran'ny maseraFantatro fa eo afovoan-tanàna io.
Monasiteran'ny vehivavy ao amin'ny filaharan'ny Cistercian izy ity ary Tsangambaton'ny firenena hatramin'ny taona 30. Naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX izy io ary Romanesque amin'ny ankapobeny ny endriny, na dia manana Gothic be aza izy io.
Tamin'ny taona 1153 dia nisy masera maromaro nanapa-kevitra ny hiditra amin'ny Order Cistercian amin'ny tany nomen'ny Count of Barcelona ary vetivety dia nahita fahombiazana lehibe teo amin'ireo andriana. Ny fifanarahana taorian'ny ady an-trano tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nitondra fanovana vitsivitsy satria ny monastera dia tsy maintsy nivarotra ny sasany amin'ireo tany mifanila aminy mba hipetrahan'ny tantsaha (ireo fifanarahana ireo dia nandrara ny fisian'ny vondrom-piarahamonina vehivavy mpivavaka amin'ny toerana lavitra), saingy izany no fiandohana an'ny monasitera ankehitriny.
Fiangonana manamarika ny fifindrana avy amin'ny Romanesque mankany Gothic ary manana tilikambo lakolosy octagonal goavambe sy tsara tarehy amin'ny endrika gothic sy ny fasan'ny mpanjakavavy Violante any Hongria, vadin'i Jaime I avy any Aragon. Azonao atao ny mitsidika ny refectory, ny lakozia, ny tranomboky, ny fiankinan-doha amin'ny monastic isan-karazany ary ny efitrano fianarana.
Tena tsara tarehy. Misy fitsangatsanganana mitarika koa ny torohevitro dia ny mba hitsidihanao ny tranokalan'ny monasiteran'ny kalandrie sy ny fotoana amin'ity taona ity sy amin'ny manaraka. Ary raha te hatory eto ianao dia azo atao. Misy trano fandraisam-bahiny misy efitrano tokana na roa misy 20 tantanan'ny monas.
Toerana telo, ilay zotra mitovy izay mampifangaro ny tantara, ny maritrano ary ny fivavahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Làlan'ny Cistercian